ဒေတာသည်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသော Super Bowl ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအောင်မြင်သူအားညွှန်ပြသည် Martech Zone
အထိရောက်ဆုံးသော Super Bowl ကြော်ငြာသည်သင်ထင်သောအရာမဟုတ်ပါ။ ဒေတာစုဆောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကြီးထွားနေစဉ်အချက်အလက်များကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်သည်အမီလိုက်နေဆဲဖြစ်သည်။ At ပါစီကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့သည် Super Bowl တွင်တွစ်တာလုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့ပြီးလူကြိုက်အများဆုံးကြော်ငြာများသည်အကောင်းဆုံးရလဒ်များရရှိခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီဆောင်းပါးရဲ့အဆုံးမှာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်အလက်များ၏အပြန်အလှန်အမြင်!
ယခုအချိန်တွင်လူအများစုကကလေးငယ်ကိုအဆုံးတွင်သတ်ပစ်သည့်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောတစ်နိုင်ငံလုံးကြော်ငြာကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိကြသည်။ ဒီထိတ်လန့်စရာကောင်းလောက်အောင်ထူးဆန်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအကြီးအကျယ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ အများအပြားကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည်ဖြန့်ချိပြီ အများဆုံးတွစ်တာ တစ်နိုင်ငံလုံးအနိုင်ရရှိသူအဖြစ်ပြသသောရလဒ်များ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သံသယရှိကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုမှာအပျက်သဘောဆောင်သောတုန့်ပြန်မှုသည်တွစ်တာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်းတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်အမှန်တကယ်လိုလားသောလုပ်ဆောင်မှုမျိုးမဟုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Microsoft ကဖြစ်လိမ့်မယ် အနိုင်ရလူမှုမီဒီယာ အဆိုပါ Super Bowl စဉ်အတွင်း။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ထိုထက်မကရှိသည် ၂၈.၄ သန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတွစ်တာများ ဂိမ်းကာလအတွင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုဆာဗာများသည်ဤလေ့လာမှုအတွက်ဆာဗာ ၉ သန်းခန့်ကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကနမူနာကောင်းတစ်ခုလို့ထင်တယ်။ အကြောင်းကို 32%.
အဆိုပါ ပါစီ လေ့လာမှုသည်အခြားသူများနှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကြော်ငြာတင်သူများ၏အကောင့်များနှင့်သာချိတ်ဆက်ထားသောတွစ်တာစာလုံးများအားလုံးမှမဟုတ်ဘဲနမူနာများသာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Twitter API မှသင်ဆွဲယူနိုင်သည့်အရာထက်ပိုမိုသောအချက်အလက်ရှိသည်။
တွစ်တာတွေကနေအချက်အလက်တွေကိုနည်းလမ်းနှစ်မျိုးနဲ့သုံးတယ် သဘာဝဘာသာစကား အဖြစ်တိုက်ရိုက် @ တရားဝင်တွစ်တာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တွစ်တာအားလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း McDonald ပုံစံအားလုံးကို (အရင်းအနှီးသို့မဟုတ်အများကိန်း w / o) တွင်လိုက်ဖက်ခြင်းနှင့် @ McDonalds.
တွစ်တာတွေအားလုံးကိုလူသိများတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကနေတစ်ဆင့်ငါတို့ဖွင့်ခဲ့တယ် စိတ်ဓါတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အရာသည်တွစ်တာတွင်အပြုသဘော (သို့) အနုတ်လက္ခဏာရှိမရှိ (Polarity) အပြင်အချက်အလက်သို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက် (Subject) ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန် algorithms ကိုအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အများဆုံး _____ စာရင်းပြုစုခဲ့သည် အများဆုံးတွစ်တာ, အများဆုံးတွေ့ကြုံနှင့် အများဆုံးပျမ်းမျှဆွဲဆောင်မှု.
တစ်ခုချင်းစီအောက် အများဆုံး item တစ်ခုချင်းစီသည် top retweets ၁၀ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုခဲ့သည်၊ သို့မှသာပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏အသွားအလာနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်အာရုံကိုအတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နံပါတ်များ - Volume by Brands
ပြကွက် - က“ သဘာဝဘာသာစကား” တွင်တွစ်တာအများစုကိုပြသခြင်း။
Exhibit A မှာ McDonalds ကိုပထမ ဦး ဆုံးသတိပြုပါ ဝမ် စင်ကြယ်သောအသံအတိုးအကျယ်အပေါ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာသိပ္ပံပညာရှင်များက Super Bowl သို့သွားလျှင် McDonalds သည်အလွန်မြင့်မားသော traffic ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် Pre-game အသွားအလာကိုချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့်၎င်းတို့၏စီးပွားဖြစ်မှပမာဏကိုအနိုင်ရရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Exhibit A တွင်လည်း Skitles, Pepsi နှင့် Doritos သည်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့်နီးကပ်သည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အနေနှင့်အမှန်တကယ်စာရင်းထက် ပို၍ ဝေးကွာနေသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်သင်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကလူတွေပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာအလုပ်လုပ်ပုံအကြား BIG ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။
စကားများသော vs. vs. ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားတွစ်တာတစ်ခုအားမြင်သာထင်သာရှိသောအရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက်လုပ်ဆောင်မှုအချို့ရှိရမည်။ Twitter အတွက်သိသာထင်ရှားတဲ့လုပ်ရပ်တွေကတော့ -
တစ်ခုခုကို Retweet လုပ်
tweet ထဲက link ကိုနှိပ်ပါ
ဒါကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုအနိုင်ဆုံးလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ဒေတာကိုပြန်ကြည့်ခဲ့တယ် စတော့ရှယ်ယာ သူတို့ရဲ့တွစ်တာအသံအတိုးအကျယ်နဲ့ထိပ်ဆုံး ၅ ခုက -
@ McDonalds (နောက်တဖန်သူတို့သည်မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်မှာပြီးသားရှိကြ၏)
ဒီတော့ဒီမှာ Microsoft ဟာ Nationwide ထက်ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတာကိုတကယ်မြင်ရပြီ။ Twitter streams ရှိထိပ်လိပ်စာများကိုကျွန်ုပ်တို့အမြင်အာရုံစစ်ဆေးပြီးမိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းများသို့ပြန်သွားသည့်အချိတ်အဆက်အများဆုံးရှိသည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ဓာတ်ကော။ Twitter မှာဘယ်သူကအချစ်ဆုံးလဲ။
အပြုသဘော vs. အနုတ်လက္ခဏာ
ပြပွဲ B တွင် - အကောင့်များနှင့်ထိပ်တန်းသဘာဝဘာသာစကားရှာဖွေမှု polarity က (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘော) နှင့်ဘာသာရပ် (အချက်သို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်) အရသိရသည်ထုတ်ဖော်။
ပြပွဲ B ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ @accounts နှင့်ထိပ်ဆုံးသဘာဝဘာသာစကားရှာဖွေမှုများအားလုံးကို polarity (အပြုသဘောသို့မဟုတ်အနှုတ်သဘော) နှင့်အကြောင်းအရာ (အရသို့မဟုတ်ထင်မြင်ချက်) အရဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ အများဆုံးအပြုသဘောအမှတ်တံဆိပ်ခဲ့ကြသည် @skechersusa, @ဘီအမ်ဒဗလျူနှင့် @wix။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များမှာ ဗစ်တိုးရီးယားလျှို့ဝှက်ချက်, တီ - မိုဘိုင်းနှင့်အံ့သြစရာမရှိပါ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားသွားလာမှုအများစုသည်အပျက်သဘောဆောင်သည်ကိုသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်သည်။
မြင့်မားသောအသံပမာဏရှိခြင်းအတွက် McDonalds နှင့် Microsoft တို့သည်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်များစွာသောအသွားအလာများလာခြင်းမဟုတ်ဘဲစကားပြောဆိုမှုအများစုမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ပေါင်းထည့်လိုက်ရင် Microsoft တစ်ခုတည်းပဲ ထိပ်ပြိုင်ဘက် မက်ထရစ် (၃) ခုစလုံးတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်း - အသံ၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေချင်တယ်၊ မိုက်ခရိုဆော့က Super Bowl စီးပွားပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရတယ်လို့ထင်တယ်၊ McDonalds သည် social media ကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ရပုံရသည်။
ကျနော်တို့ tweets တွေအများကြီးဆွဲနေစဉ်, သူတို့အားလုံးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀၀% ကိုကြည့်ပါကဤအချက်အလက်အချို့သည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အခြားရင်းမြစ်များက Budweiser ကိုစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်နေရာချထားသည်။ အကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာမတွေ့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ကွာဟမှုကိုငါတို့မသိ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဝန်ခံချင်တယ်။
McDonalds အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံလိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်ယောင်များထဲသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လူတိုင်းအတွက်အခြေခံများမရှိပါ။ McDonalds ကအလွန်ကြီးလွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ချက်ကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်လိုသည့်ဂိမ်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်ကိုပြသခဲ့သည်။
@mercedesbenz နှင့် @ဝိတ်ကြည့်သူများ ပရိသတ်များနှင့်အဆက်အသွယ်အများဆုံးသောပရိသတ်များသည်သူတို့၏ tweets များမှစွဲမှတ်မှုအများဆုံးနှုန်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
ငါတို့မဖမ်းခဲ့ဘူး #LikeAGirl သောလူကြိုက်များ hashtag (ငါတို့မကောင်းတဲ့) ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားလေ့လာမှုများကပြသသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်ပမာဏမရောက်ရှိသေးပါ။
ပါစီ Big Data အခွင့်အလမ်းများကိုဖန်တီးရန်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောကျွမ်းကျင်မှုသည် Big Data ၏နည်းပညာလောကနှင့်စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ၏လက်တွေ့ကျသောကဏ္aspectsများအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်း၊ ဖြေရှင်းနည်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အချက်အလက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ မြင်ယောင်စေရန်အဖွဲ့အစည်း၏အရည်အချင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါသည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ whitepaper ကို download လုပ်ပါ။ အပြင်မှာအချက်အလက်များ၏ကြီးမားသောကမ္ဘာကြီးရှိပါသည်.
Tags: အမြဲအကောင်းဆုံးစီးပွားဖြစ်အကောင်းဆုံး superbowl စီးပွားဖြစ်ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုဘီအမ်ဒဗလျူLexusမက်ဒေါ်နယ်ရဲ့microsoftတစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာခံစားချက်စိတ်ဓါတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ။skechersusaလူမှုရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလူမှုမီဒီယာစူပါဖလားကိုစူပါပန်းကန်စီးပွားဖြစ်superbowlတွစ်တာwix
သင် "စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်" ရှိခဲ့သည်ကိုသင်သိပါသလား။